လျှင်သင်သုံးစွဲအချိန်အများကြီးရှာဖွေနေအားလုံးအတွက်အင်တာနက်ကျော်အရပ်မွေ့လျော်ဖို့အရေးယူလိင်ဂိမ်းများရှိသည်ဖို့စီမံလာ၏တိုတောင်းသောသင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များ၊ရစေရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြိုဆိုဖို့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစက်အွန်လိုင်းအခုအချိန်မှာသင်ခံစားချင်တယ်ဆိုရင် XXX။ အဆိုပါစီမံကိန်းသည်သဘာဝအခေါ်အရေးယူလိင်ဂိမ်းများနှင့်ကျနော်တို့ကယ့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားၿဘယ်အဖွဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်အပေါ်နောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်။, ကျွန်တော်တို့တွေဟာနိဗ္ဗာန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကိုရောက်စေဖို့အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးမှကြွလာသောအခါဂိမ်းပျော်စရာ:ဘာမှမဒီမှာသွားသင်ပျော်ရွှင်အောင်ထိုအဟုတ်၊သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်ကျနော်တို့အပြည့်အဝခင်းကျင်းနှစ်သက်သောလိမ့်မယ်နိုင်အောင်သင် jizz အချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းသည်လုံးဝအရွယ်ရောက်-အာရုံပျက်လွန်းလျှင်၊ဒါကြောင့်သင်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းမင့်သွားနိုင်မှရောက်စေချင်သင်သည်အဘယ်သို့ကို၊သွားရမှာတော်တော်ကြီးမှတ်ဉာဏ်နှင့်ပျက်ပြယ်ပြီးတာနဲ့သင်မြင်သောအဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ဧရိယာ။ အဘယ်ကြောင့်စွန့်ပစ်အချိန်နှင့်အတူကုန်သော၊မပေးပါဘူးသင်သည်ကုန်ပစ္စည်းများ?, အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုမှာအရေးယူလိင်ဂိမ်းများအခုအချိန်မှာဘယ်လိုပိုကောင်းအဖွဲ့ပါဘူး။ သင်အမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးဘယ်အရာကိုသင်ဒီမှာတွေ့ကြောင်းအများကြီးငါကတိပေးနိုင်ပါ!
ကနေစတင်ခြင်းဤစီမံကိန်း၊ကျနော်တို့ကြောင်းသိရေဖြစ်သွားခဲ့ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံး၏အရေးယူညမ်းဂိမ္းစိတ်ကူး။ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးပေးရန်သင်ယောက်ျားတွေ ၁ အသစ်ခေါင်းစဉ်လစဉ်အပေါ်အခြေခံပြီးကတည်းကကျွန်တော်တို့စတင်! ယနေ့အချိန်တွင်၊ကျနော်တို့က ၃၅ ဂိမ်းအတွင်း၊ငါအလေးအနက်ကိုသင်သည်ဤလုံးဝဖန်တီးခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းအားဖြင့်။ ခြင့္ျမည်သည့်ပြင်ပအရမိမိတို့လက်ကိုအပေါ်ရရှိနိုင်သည့်အဘယ်အရာကိုအစုမှာအရေးယူလိင်ဂိမ်းများသာသင်ပေးနှင့်အတူဂိမ်းကစားခြင်းချမ်းသာသောမျှော်လင့်ပြီးဘာမှ။, ကျွန်တော်တို့ဟာမစ်ရှင်အပေါ်ပေးအနေနဲ့သီးသန့်ဒေတာဘေ့စဒီမှာ၊ရိုးရှင်းစွာကြောင့်ပိုပြီးထိန်းချုပ်ကျနော်တို့ကျော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်း၊ပိုကောင်း။ ကျနော်တို့မှန်မှန်ဖါဟောင်းနွမ်းချို့ယွင်းနှင့်အသစ်ထည့်ကြောင်းအရာအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ၊ဒါကြောင့်သင်ချင်တယ်သေချာအောင်သင်ဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးမှတရားဝင်အရင်းအမြစ်၊စိတျနှလုံးအသားအေရအဘယျသို့သင်တို့အဘို့အ bargained။ အိုး၊ငါတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်အပေါ်စီမံကိန်းများနှင့်ခေါင်းစဉ်ပြီမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အလေးအနက်။ လာတွင်သာအပြည့်အဝအကွာအဝေးနှင့်အချိုပွဲနှင့်ပြောပြကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျအဘယျသို့ထင်! အသေးစိတ်သင်ပေးဖို့၊ပိုကောင်း။, ဤအဝင်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအတွေးလွန်းတာမဟုတ်ပဲဒီမှာထိုင်ကြကုန်အံ့သင်ပွေးနှင့်ငါတို့အကြံပြုချက်များတာကြောင့်ရရှိသွားတဲ့ကဲ့သို့ကောင်း။
လိင်အရေးယူဂိမ်းများရှိပါတယ်အလွန်ကြီးစွာသောအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်သင်လည်းဖြစ်လာနိုင်၏အစိတ်အပိုင်းချင်လျှင်။ အကြီးမားဆုံးဧရိယာတွင်ဆိုက်သည်အမှန်တကယ်ချွတ်-၊အကြီးအကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအားဖြင့်။ လူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရေးသားမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ရက်အနှံ့အတော်များများကွဲပြားခြားနားသောချန်နယ်နှင့်အုပ်စုအောင်သင်တော်တော်အများကြီးသင်ချင်သမျှကို။ ကိုလည်းသင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီအသုံးဝင်သောလျှင်သင်မည်သည့်အချက်မှာညပ်များ၏တဦးတည်းအတွက်ဂိမ်းရှိသည်နှင့်နိုင်ချင်မှအကူအညီတောင်းသောသူတစ်စုံတစ်ဦးမှသိတယ်သူတို့ဘာလုပ်နေ။, ဒါဟာသဘောမျိုးတွေအများကြီးရောက်စေဖို့သင်ရဲ့ဒီအဆင့်အပြန်အလှန်နှင့်အတူလူတိုင်းထိုအဟုတ်၊သင်မျှဝေနိုင်ပါသည်ညမ်းတွင်းလွန်း! မှတ်ချက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအရေးယူပုံစံ၊အဓိပ္ပါယ်မရှိသောအများကြီးများအတွက်အခန်းယူ-အားလပ်ချိန်။ မေးသင့်တဲ့မေးခွန်းနှင့်အနည်းငယ်မြော်လင့်လျက်–သငျသညျအရလိမ့်မည်၊အဆိုပါဂိမ်းကစားကြလွန်းအလုပ်များခံစားမိမိတို့ကိုအမှန်တကယ်ကူညီချက်ချင်း! အိုး၊ဖြစ်လာလျှင်သင်အနည်းငယ်ဝါ၏ပလက်ဖောင်းမှအခမဲ့ခံစားရကိုကူညီအထဲကသာမန်တော့သူတို့လည်းစူးစမ်းနိုင်ပါတယ်နှင့်ပျော်မွေ့အပြည့်ခင်းကျင်း၏ကောင်းမြတ်သူတို့ကိုမှရရှိနိုင်မှာလိင်အရေးယူ။
ဒါကြောင့်ကြည့်ရှု:ငါဖြုန်းချင်ပါဘူးဆိုအပိုအချိန်ဒီမှာအကြောင်းပြောနေတာဘယ်လိုကြီးစွာသောမူလဖြစ်ပါသည်၊ရိုးရှင်းစွာသောကြောင့်၊ဒါကြောင့်တစ်ခုခုရဲ့အကြောင်းသင်အတွေ့အကြုံနှင့်ခံစားဘို့အသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမမေးသောမေးခွန်းများ။ ကျွန်တော်ပြထားတဲ့အချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အကျနော်တို့နိုင်ခဲ့ပြီးပါပြီ၏အကောင်းဆုံးဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာဝိုက်ကောင်းစွာ၊အဆိုပါစို့သောအရေးယူလိင်ဂိမ်းများရှိပါတယ်ရှေ့မှာသွားတာရှည်လမ်းကျနော်တို့ပစ်မှတ်ထိမှန်ခဲ့တယ်နတာပဲ။, အလုပ်လိမ့်မယ်သဘောမျိုးတွေအများကြီးသင်တို့အဘို့အတူပါဝင်ပတ်သက်ဖို့နောက်ကျတာထက်ဒီမှာ၊ဒါကြောင့်ဖို့သေချာပါစေသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးနှင့်သင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်အချိန်အတွက်အားလုံးမှာအရေးယူမှုတွေကိုလိင်ဂိမ်းများနိုင်ရောက်စေဖို့သင်အနေနဲ့အတွေ့အကြုံကအခြားပလက်ဖောင်းနိုင်သာ၏အိပ်မက်မှာ။ ကျေးဇူးအများကြီးလာလျှောက်ပြီးယခုပြန်လာတဲ့အခါတိုင်းသင်လိုအပ်တဲ့ထိပ်တန်းအရည်အသွေး XXX အတွေ့အကြုံနှင့်အတူအပြန်အလှန်အာရုံစိုက်!